Uphengululo lweprojektha ye-GP90: ukusebenza kakuhle nge- € 120 | Iindaba zeGajethi
UJuan Luis Arboledas | | Reviews
Emva kwexesha elide sizama ukwenza uvavanyo olunje, siye sakwazi ukufikelela kwiprojektha, ngokuchaseneyo nento onokuyicinga ngaphambi kokucebisa ukuba ithengwe, inamandla ngakumbi kwaye inomdla kunokuba unokucinga, ungasathethi ke phantse ukuthenga okunyanzelekileyo kuye nawuphina umntu ofuna ukuzama enye yezi zixhobo Phambi kokumilisela ekuthengeni enye eyenziwe luphawu olwamkelwe kwilizwe liphela.
Ngaphambi kokuba uqalise ukuphonononga yonke into efana neprojektha GP90Ndingathanda ukugxininisa ngokuchanekileyo umahluko wale mveliso kunye nokhuphiswano ukusukela, ngelixa ii-brand ezinje nge-JVC, i-Sony okanye i-Epson, iinkampani ezintathu ezinabadlali abaphakathi kwabona baziwayo kwimarike, banexabiso I-avareji ingaphezulu lee kwi-euro ezingama-3.000, kwimeko enqabileyo i-GP90 inokuba yeyakho ngaphezulu nje kwama-euro angama-200, uthetha ngexabiso elisemthethweni, ngaphandle kwezaphulelo. Ukuba uyayifuna ngezaphulelo, ungayithenga apha nge-119 kuphela ye- € njengoko siza kubonisa ekupheleni kolu hlalutyo.
1 Umsebenzi kunye nomtsalane wobugcisa
3 Iprojektha ye-GP90 ivavanyiwe
Umsebenzi kunye nomtsalane wobugcisa
Elinye lawona manqaku anomdla wale projekthi, ngaphandle kwamathandabuzo, yeye-aesthetics yayo. Icandelo apho abayili beenkampani basebenze nzima kwaye inokuba sesinye sezizathu ezinamandla zokuba kutheni abasebenzisi abaninzi bekhetha le projektha kunabanye abaneempawu ezifanayo onokuzifumana kwintengiso.
Okwangoku, ngaphambi kokuqhubeka, kufuneka sithathele ingqalelo ngokuchanekileyo ukuba sithetha ngemveliso enexabiso elisemthethweni lingaphantsi kwe-200 euro, into eyenza izixhobo ezisetyenzisiweyo, ngaphandle kwento yokuba babonisa ukulunga ngokugqibeleleyo kunye nomgangatho olungileyo Senze sithandabuze ukuba banokuma njani kuvavanyo lwexesha.
Ukugxila okomzuzwana kubuhle bayo bangaphandle, sifumana ityala elenziwe ngokupheleleyo ngeplastikhi kukuchukumisa okuhle kakhulu. Ngaphezulu kwayo sifumana ngokuthe ngqo amaqhosha okulawula amandla weprojekti kunye neenketho ezahlukeneyo zemenyu, umthombo esifuna ukuvelisa kuwo ... Umphambili, indawo apho ikhoyo ilensi enkulu, ime ngaphandle kwithoni yayo yesilivere, eyahluke kabukhali kuyo yonke imeko emnyama. Ukuba siya kwelinye lamacala alo, sifumana amavili ukuphucula inkcazo yomfanekiso, sele ngasemva, sifumana umbane kunye I-RCA, i-USB, i-HDMI okanye igalelo le-VGA.
Njengoko ubona, le projektha ilungele ukusetyenziswa nakweyiphi na into ekhaya ngenxa yokunxibelelana kwayo kunye namandla ayo. Okokuqala, kuya kufuneka uthathele ingqalelo into engekathethi ngayo kwaye ngokuchanekileyo bubungakanani beprojektha, into ekufuneka siyithathele ingqalelo xa kuthengwa imveliso enje. Ngeli thuba, i-GP90 ibalasele eyayo Iisentimitha ezingama-28 ngaphambili, iisentimitha ezingama-22 ubunzulu kunye neesentimitha ezili-10 ukuphakama.
Ukuba siya kwicandelo leempawu zobuchwephesha, inyani kukuba sijamelene nemveliso enomdla kakhulu ngaphandle kokufuna ukuba yeyona intle kwimarike okanye sikhuphisane neempawu ezinkulu. Umzekelo esinayo kweyakho umda wokuthelekisa apho sihlangana khona 10.000: 1, yanele ukubonelela nge isisombululo esihle se-1200 x 800 pixels ngokwendalo nangona, ngesoftware, esi sisombululo sinokuphakanyiswa ukuya kwi-1920 x 1080. Kwelinye icala, imibala icace gca ngokukhanya okuphezulu okumhlophe nombala I-3.200 Lumens.
Kweli candelo kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba Iprojektha ixhotyiswe ngesibane esinokuphila iiyure ezingama-30.000. Ukubeka oku ngokomxholo, xelela ukuba lo mlinganiselo ulingana nokubukela imovie yonke imihla malunga neminyaka engama-40. Kweli candelo, inyani kukuba andicingi ukuba kufanelekile ukufaka amanani ukusukela, kwiimeko ezininzi azifuneki, kungoko ndingathanda ukugxila kwiziphumo esizifumene kuvavanyo.
Iprojektha ye-GP90 ivavanyiwe
Ukwenza uvavanyo lwethu, kuthathelwa ingqalelo iimpawu zesixhobo, asifuni ukusebenzisa obona buchwephesha sinabo, kodwa ukuzama ukulinganisa imeko yasekhaya ethe kratya. Unale nto engqondweni, xelela ukuba kuvavanyo sisebenzise nje iinkqubo ezahlukeneyo ezinjengelaptop, ikhonsoli yesizukulwane esilandelayo kunye nomdlali we-UHD Blue-ray, ukufumana okumangalisayo, ngaphandle kwamandla kunye nomgangatho wevidiyo okhutshwe kwinkqubo nganye, ngaphezulu okanye ngaphantsi iziphumo ezifanayo.
Siqala uvavanyo ngokucinezela isitshixo samandla seprojektha, emva kwesi senzo siqala kwimizuzwana embalwa. Nje ukuba siwubone umfanekiso kufuneka sisebenzise amaqhosha akwicala ukulungisa inkcazo yomfanekiso. Okwangoku, ngenxa Uhlengahlengiso lweprojektha yesandla, kulapho mhlawumbi sinokufumana khona eyona ngxaki inkulu kuba akukho lula ukufumana umfanekiso ubonakale ubukhali ngokupheleleyo. Ewe kunjalo, konke oku kuxhomekeke kumonde wethu kunye novakalelo lwethu xa ujika ivili.
Nje ukuba umfanekiso uhlengahlengiswe ukuthanda kwethu, into enokusithatha ixesha elifutshane okanye ixesha elide, kuxhomekeke ekubonakaleni nasekungcamleni, Iziphumo zilungile kunye nomgangatho okhoyo kumfanekiso, ngokubanzi, uhlala uzinzile. Ukusuka kumava am, inyaniso ihlala ingcono kakhulu ukusebenza nesisombululo somfanekiso kwifomathi yemveli kwaye ukuba siyilinganisela, iphazanyiswe kancinci.
Uphengululo lwe: UJuan Luis Arboledas
Umgangatho womfanekiso olungileyo
Uhlengahlengiso lwemifanekiso ngesandla
Siza kwicandelo lesiphelo, kum, ubuncinci ngokobuqu, eyona inzima kuvavanyo lonke kuba kufuneka sivavanye onke amanqaku amahle emveliso efana ne-GP90. Nditshilo, lixesha lokuba ndivavanye iprojektha kwaye, ngokobuqu, kufuneka ndivume ukuba, nangona kukho iindlela ezingcono kwintengiso, kwaye azikho mbalwa, inyani kukuba xa sihluza zonke ezi zinto xabiso, ngaphambili enye yeeprojektha ezinomdla onokuzifumana namhlanje.
Ngaphandle kwamathandabuzo, iya kuba yinto onokuzama ukuyenza ukuba ufuna ukuba nomnye waba badlali ukuze uqale ukuyisebenzisa, ubone ukuba inganikezela ngantoni na, funda ngeempawu zayo kwaye ngakumbi indlela yokusebenza nayo. Ngenxa yoku, ndingacebisa ukuba, ukuba awuzange ubenayo kodwa ufuna ukuyizama, ukhetha i-GP90 ngelixa, ukuba sele unayo kwaye ufuna enye, kunokuba ngumdla ngakumbi ukuzama ezinye iintlobo ze iinkqubo ezigqibe ngakumbi nezinamandla nangona, zona, zibiza kakhulu.
Ukuba ufikelele esiphelweni solu vavanyo kwaye, ukongeza, unomdla wokufumana iyunithi ukuze uzibonele ngokwakho ukuba inakho na, ukuxelele ukuba namhlanje phezulu Iyathengiswa ngesaphulelo sama-33%, oko kuthetha ukuba unokufumana iyunithi emalunga nee-euro ezingama-125, ixabiso elinokuncitshiswa 119'69 kowethu ukuba sisebenzisa ikhuphoni: SET5OFF. Cofa apha ukuyithenga ngexabiso lentengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Uphengululo lweprojektha ye-GP90, efikelelekayo kwaye inomdla kakhulu
UJuan Diego suarez pedraza sitsho
Molo, ndilifumene inqaku lakho linomdla kwaye lindincede ndaziqinisekisa ngokupheleleyo kwaye ekugqibeleni ndiza kuthenga le projektha. Ndinombuzo endifuna ukuba noluvo lwakho ngawo;
Sisiphi isixhobo onokuthenga kuso ukubeka i-android, i-wifi kunye ne-bluetooh kwiprojektha? Ngaba ungandicebisa nayiphi na?
Phendula u-Juan Diego suarez pedraza
Uhlalutyo lweMidlalo yeGran Turismo, ukubuyela kwimvelaphi yePolyphony